Another challenge for Netflix and Disney + on the horizon. HBO Max will start in May ﻿
Another challenge for Netflix and Disney + on the horizon. HBO Max will start in May
Netflix and Disney + on the horizon အတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှု။ HBO Max မေလတွင်စတင်မည်
AT&T တယ်လီကွန်းကုမ္ပဏီကြီးက ဗီဒီယိုဈေးကွက်မှာခိုင်မာတဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအသစ်တစ်ရပ်ကို ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ AT&T ကုမ္ပဏီက TimeWarner Groupကိုဝယ်ယူပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအသစ်ကိုလုပ်ဆောင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ AT&T ရဲ့အားသာချက်ကရုရှင်နဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ Warner Bros အပါအ၀င်တစ်ခြားနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ HBO နဲ့ New Line Cinema တို့ရုပ်ရှင်စာရင်းတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ HBO Max ကိုယခုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် HBO ကမူလပြသနေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအပြင် တစ်ခြားရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ထုတ်လှုပ်မှုအများအပြားကို ပါတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကွန်ရက်ဈေးကွက်အသစ်ကလက်ရှိ HBO Now ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။ယှဉ်ပြိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလိုပဲ၎င်းက user အကောင့်တစ်ခုအတွက်ပရိုဖိုင်ဖန်တီးဖို့လည်းလုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့လူကြီး သို့မဟုတ် ကလေးပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ပရိုဖိုင်တစ်ခုချင်းကိုတစ်ဦးချင်းတည်းဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးဟာ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်တို့ကို ဗဟုသုတတိုးစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
HANA အသင့်စားရှမ်းခေါက်ဆွဲဟာ ဆီဖြင့်ကြော်ထားခြင်းမဟုတ်သော Non-Fried ဆန်ခေါက်ဆ...
Show the postings (13)
The Myanmar First Asia is Group of companies focused in Marketing and Distribution of Gems & Jewellery, Lubricant, Coach and bus , Food and Beverages founded in 2008. Myanmar First Asia is striving to...